Tetikasa Eco village no hampandroso an'i Madagasikara - Madagascar Informations
25 octobre 2017 26 octobre 2017 Gasikara Aucun commentaire
Efa ela no namolavolany ONG Madasun Dirm ity tetik’asa ity izay natao hanatsarana ny farim-piainany olona monina ety amin’ ny tontolo ambanivohitra .
Saika natao anjorom-bala foana hatramin’izay ny zanakin’ny tantsaha kanefa tonga izao ny fotoana hijerena ny ho avy sy ny sosialin’izy ireo amin’ny alalany fametrahana ny eco village eto amin’ny kaomina Fihaonana .
Velaran-tany mirefy 40ha ao amin’ny fokontany Tsimialonjafy no hanatanterahana ny tetik’asa ka trano miisa 240 no haorina ao .
Amin’ny maha fananganan fiaraha monina vaovao ity programan’asa ity dia anisany ho hatsangana ao ny tobim-pahasalamana ,kolejy teknika ,kianja hilalaovam-baolina ary fiangonana izay rafitra natao hitaizam-panahy .
Ho fampandehanana izao tetik’asa izao ary dia nisy fiantsoana ireo tanora 18 hatramin’ny 40 taona vonona hamokatra eo amin’ny tontolony fambolena sy ny fiompiana .
Tsy ilaina intsony ny fanafarana vary any ivelany fa afaka ny hahavita tena ara-tsakafo isika aorian’ity tetik’asa ity .
Raha ny zava misy amin’izao mantsy dia mbola ny 60 % ny sakafo hohanin-tsika ihany no vokarin-tsika eto an-toerana fa saika mbola hafarana avokoa ny 40% .
Tanjona anefa ny ha sompitry ny Ranomasimbe Indiana an’ny Madagasikara .
Manapahaizana Malagasy manana traik’efa aty amin’ny faritry Afrika no handray an -tanana ny fampiofanana amin’ny alalany fampiasana teknolojia vaovao ireto tanora ireto ka ho ampitomboina araka izay tratra ny voka-bary miakatra isakin’ny Ha .
Tsy ho latsa-danja amin’ireo ihany koa ny fiahiana manokana ireo vehivavy izay antokin’ny fampandrosoana ka ilaina ny fifanakalozana traik’efa eo amin’ny samy vehivavy izay tafiditra ihany koa ao anatiny tetik’asa .
Amin’ireo Kaomina miisa 1693 manerana an’ny Madagasikara dia voafidy tao anatiny maro ny kaomina Fihaonana hanatanterahana ny tetik’asa eco village i.
Ny Ong Madasun Dirm no tompon-kevitra amin’ny fanatanterahana izao tetik’asa izao izay marihina fa fikambanana tsy manao politika fa fikambanana mitarika vahoaka hampandroso ny faritra ao aminy .
Hanomboka ny faha 3 ny volana Novembre ho avy izao ka haharitra 40 andro ny fiofanana omena ireto tanora ireto
Toy izao ary ny fanehoan-kevitrin’ireo tanora liana amin’ny tetik’asa .
← Messe à AMBOHIMAMORY
Princesse Anne d’Angleterre dans le Nord de l’ile →
30 octobre 2016 Madagascar Informations 0